Oovimba abagcina iincwadi
I-audioboom iyathenga kwi-podcast engenayo
I-audioboom (i-BOOM) kukungaxatyiswa kokuthengiswa kwesitokhwe kwiNtengiso yeLSE yoTyalo-mali oLunye ukusukela ngo-2014, kwaye lelinye lamaqonga amakhulu e-podcast kolu shishino.
Ukungabikho koxabiso mhlawumbi ngenxa yezizathu eziqondakalayo, kuba inkampani ayikaze yenze nzuzo.
Kodwa umbono ujonge ukuba ukudana okungapheliyo kwiphambili kunokutshintsha kube ngcono.
Kukho ukomeleza amaxabiso emva kwesitokhwe ngeli xesha, kunye nedatha yamva nje kwintengiso yase-US ngokuqinisekileyo iyanceda kwaye, okona kubaluleke ngakumbi, yomeleza umfanekiso wengeniso.
I-audioboom ngoku ngu-4 e-US
Ngokwe-analytics firm Triton Digital kaFebruwari 2021 Ingxelo yePodcast, apho ikwindawo yesine yeAudioboom kwindawo yentengiso yase-US qho ngeveki kubasebenzisi, yongeze i-1.5 yezigidi zabasebenzisi beveki ukusukela ngoMeyi 2020 ngokunyuka nge-71%.
Iqonga lilinganise i-3.8 yezigidi zabasebenzisi beeveki kwixesha lokunika ingxelo lakutsha nje elihlalutywe yiTriton kwaye ikwindawo yesihlanu yokukhuphela yonke imihla.
Nangona kunjalo, la manani asisisithethi somfanekiso opheleleyo njengoko ilinganisa kuphela ukusebenza kweepremiyamu hayi ezinye zeendlela ezingama-8,000 zepodcast kwiqonga leAudioboom elenziwa imali ngentengiso yenkqubo.
Ifomathi yepodcast iyakhula ngoku, kunye nezinye izivumelwano zeMega ezenziwe nguSpotify ekrwela ithuba lokuthengisa. Izivumelwano zezigidi zeedola kulo nyaka uphelileyo nee-Obamas, uJoe Rogan kunye neKardashians kwaye kutsha nje kunye noMeghan noHarry, bonisa ukuba umlo wepodcast uyatshisa kwaye iSpotify icwangcise ukuba nguNombolo 1.
Ke ingena phi iAudioboom?
I-Spotify ayingomntu okhuphisana naye ngokuthe ngqo ngempahla ezimeleyo enje ngeAudioboom ebonelela ngeenkonzo kubantu besithathu.
Iqonga leAudioboom livumela amaqabane alo ukuba afake ngokulula, abelane kwaye aphinde ahlangane nomxholo- imodeli yeshishini ekhokelele ekuhlanganiseni malunga nezigidi ezingama-40 zokuphulaphula ngenyanga.
Isebenza ngokusondeleyo namaqabane ayo ukwenza imali ngemveliso, umzekelo ngokufunda, ukungena okunamandla kwintengiso yangaphambi nasemva kokuqengqeleka kweentengiso zeevidiyo. Kananjalo isoftware yayo njengenkonzo (i-SaaS) enikezela ngelifu yenza indalo, usasazo kunye nokudityaniswa komxholo weaudiyo yedijithali kwizixhobo, iinethiwekhi kunye nemimandla yomoya.
Kwiziphumo zayo zokugqibela zonyaka ophela nge-31 kweyoMnga le nkampani inike ingxelo yengeniso ehambele phambili engama-20%, engena nge- $ 26.8 yezigidi.
Nangona kunjalo, iAudioboom yenze ilahleko yenzuzo yokusebenza- ye- $ 3.09 yezigidi (ngeniso-eyi- $ 3.3 yezigidi). Nangona kunjalo ilahleko ibinciphile. Kwi-2018 ilahleko ime kwi- $ 8.23 ​​yezigidi kunye- $ 7.44 ngo-2019.
Yongeza kuloo ndawo ikhula ngokuthe ngcembe, ebekelwe i-accelearte kulo nyaka, ngokweengqikelelo zenkampani, njengoko kubonisiwe kwitafile engezantsi:
Ukuphela konyaka wengeniso yencwadi yokulalelwayo i-31 kaDisemba
Kuyavunywa ukuba iAudioboom kuye kwafuneka ize emarikeni ukuze inyuse imali ukuze iqinise indawo yokuhamba kwemali, izisa i-5.5 yezigidi kunye ne-4.6 yezigidi kwi-2019 kunye ne-2020 ngokwahlukeneyo, ngale ndlela. Kodwa inkampani ithi ngoku inemali esulungekileyo "kwikamva elibonakalayo".
Kumqondiso wobume obomeleleyo beshishini layo, ingxelo yonyaka opheleleyo yenkampani yabonisa ukuba sele ibhukishe ikhuselekile ngokulingana ne-80% yengeniso ye-FY 2021.
Ukuqhubela phambili kwi-EBITDA elungileyo?
Umphathi oyintloko uStuart wokugqibela wayeqhelekile malunga nethemba lenkampani.
"I-2021 isethwe ukuba ibe ngunyaka wokuqalwa kweAudioboom njengoko siqhubela phambili ishishini kwinqanaba elibalulekileyo le-EBITDA. Ndichulumancile sisiqalo esisele sisenzile ekufezekiseni iinjongo zethu kunye neNkampani esele ityikitye ukubhukisha kweentengiso ezimele ngaphezulu kwama-80% kulindelo lwangoku lweemarike njengengeniso yonyaka opheleleyo, kwaye ndijonge phambili ekunikezeleni ngohlaziyo kwinkqubela phambili yethu Uhlaziyo lwe-Q1 lokuthengisa ngo-Epreli,”Kuxelwe okokugqibela.
Kwicala lomngcipheko, iAudioboom iyaqhubeka nokutshisa ngemali, ngokuhamba kwemali simahla ngokungathandekiyo, kunye nophuculo olwenziweyo ngokunyusa ingxowa-mali, njengoko kuchaziwe ngaphambili.
Isandi sokuhamba kwemali simahla kwisabelo ngasinye ($)
I-audioboom (BOOM) amakhandlela eentsuku ezi-1, ngomhla wama-26 kuMatshi ngo-2021
Ukunyuka nge-5% kwi-532p namhlanje, ukunyuka kwamaxabiso kuyomelela ukusukela kwingxelo yomvuzo, njengoko kubonisiwe kwitshathi engentla, kungakho ukuthatha inzuzo ukuza.
Kodwa nokuthathela ingqalelo imbali yangaphambili yezimvo ezikhuthazayo ezivela kubaphathi ezingakhange zifanise ubunyani bengeniso, kunye nokuqhubeka kwayo nokungakwazi ukwenza imali, amathuba alo nyaka abaluleke kakhulu kwi-cmopany asephezulu xa kuqikelelwa uqikelelo lwengeniso, ukuba isekhona uqikelelo.
Ukuba ufuna isitokhwe izimvo zorhwebo, Silinganise esi sitokhwe ngokuthenga okucingelwayo
tags Incwadi yeaudio (BOOM), izitokhwe zokuzonwabisa, amasheya eendaba, podcasts